Famahana olana ho an’Atsimondrano – Cirdoma : « Vita telo minitra ny fanamarinana ny fananan-tany » | NewsMada
Niverina nisokatra na­nomboka ny alakamisy 30 jolay 2020 teo ny fari-piadidiana ny fananan-tany (Cir­doma), eny Atsimondrano rehefa nikatona noho ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny firenena. Anisan’ny mampiavaka ny eny an-toerana sady ni­santarana ny fomba fiasa ny fananany fitaovana, ilay «Guichet automatique» na milina famoahana «Taratasy fanamarinana fananan-tany» sy ny «sari-tany» anaty fo­toana fohy sy tsy ilana fikirakirana antontan-taratasy maro. Tsy sarotra ho an’ny mpanjifa ny manokatra azy, araka ny nambaran’ny lehiben’ny Cirdoma, Atsimon­dra­no, Rakoto Jean René. «Miroso amin’ny atao hoe «dématérialisation» ny sampandraharahan’ny fananan-tany eo anivon’ny minisite­ran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP). Afaka mahazo ny «certificat de situation juridique» na «plan»n-ny tany anatin’ny telo minitra ny mpanjifa raha mangataka izany», hoy izy.
Azo eo no ho eo ny taratasy nangatahina
Tafiditra amin’ny fanafainganana ny fandraisana ireo olona izany. Nanteriny fa ilaina izany, indrindra amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. «Tsy misy mi­hitsy ny fifampikasohana eo amin’ny mpanjifa sy ny mpiasan’ny fananan-tany», hoy ihany izy. Nanazava ny fomba fiasa ao amin’ny «guichet unique» kosa ny mpikajy ny fananan-tany ao Atsi­mon­drano, i Tsimiava Ro­berte. «Dingana voalohany ny fandoavana vola sy ny fampidirina ao anatin’ny milina ny momba ny tany sy ny mpanjifa. Mahazo marika miafina «code secret» ny mpanjifa, ampidirina ao anatin’ny guichet. Azo eo no ho eo ny antontan-taratasy nangatahina», hoy izy.
Fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa
Notsindriny fa manafaingana ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ity guichet unique ity. Hentitra kosa anefa ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana, hiarovana sy hisorohana ny fipariahan’ny coronavirus eny amin’ity birao ity.